My God! Father (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီကားကတော့ တရုတျကား Duckweed (2017) ကို remark ပွနျရိုကျထားတဲ့ကားလေးပါ
မငျးသားမငျးသမီးတှကေလဲ Pope Thanawat Wattanaputi, Ter Chantavit Dhanasevi, Sammy Cowell တို့ပါ
ဒီကားကထိုငျးကားတှရေဲ့ထုံးစံအတိုငျး comedy,romance ဘကျကိုပိုသှားထားပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြး
ပွိုငျကားမောငျးရတာ ဝါသနာကွီးတဲ့ ဂေါ့ဟာ ခနျြပီယံဆုတှရေသညျထိအောငျ အောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့
သူ့ရဲ့ဖခငျဖွဈသူက သူ့ရဲ့ဝါသနာကို ငယျစဉျကတညျးက ပိတျပငျခဲ့တာမလို့ အဲ့တာကို အမွဲမကနြေပျဖွဈနခေဲ့သူပါသူ့ရဲ့ဖခငျက အန်တရာယျမြားတဲ့အားကစားတဈခုဆိုကာ ပိတျပငျခဲ့တဲ့အပွငျ သူငယျစဉျမှာပဲ ကိစ်စတဈခုနဲ့ထောငျကခြဲ့ပွီး
ထိုအခြိနျမှာပဲ သူ့မိခငျဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသသှေားခဲ့ပါတယျ
အဲ့လိုအခကျြတှကွေောငျ့ သူ့ဖခငျနဲ့သူနဲ့ဆကျဆံရေးက အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး
အဲ့ဒီနောကျတော့ ဂေါ့ဟာ ကားတိမျးမှောကျမှူတဈခုဖွဈပွီး အတိတျကာလကို ပွနျရောကျသှားခဲ့ပါတယျသူပွနျရောကျသှားတဲ့ကာလဟာ သူမမှေးခငျ ၁၉၉၈ ခုနှဈဖွဈပွီး အဲ့ဒီကာလမှာ သူ့ရဲ့ဖခငျဖွဈသူနဲ့ပွနျတှကေ့ာ
ဖခငျဖွဈသူနဲ့ သူငယျခငျြးအဖွဈနသှေားရငျး သူ့ဖခငျရဲ့စိတျသဘောထားတှကေို တဖွညျးဖွညျးသိလာရတဲ့အခါ……ပစ်စုပ်ပနျမှာရော ဂေါ့နဲ့သူ့ဖခငျကွားက အဖုအထဈတှကေို ပွပေကျြစနေိုငျမလား….
အတိတျကာလကို ရောကျသှားခြိနျမှာလညျး ရယျစရာအဖွဈအပကျြလေးတှနေဲ့ ရိုကျကူးပွသထားပါတယျ
ဒီကားကတော့ တရုတ်ကား Duckweed (2017) ကို remark ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ
မင်းသားမင်းသမီးတွေကလဲ Pope Thanawat Wattanaputi, Ter Chantavit Dhanasevi, Sammy Cowell တို့ပါ
ဒီကားကထိုင်းကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း comedy,romance ဘက်ကိုပိုသွားထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း
ပြိုင်ကားမောင်းရတာ ဝါသနာကြီးတဲ့ ဂေါ့ဟာ ချန်ပီယံဆုတွေရသည်ထိအောင် အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်
သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ဝါသနာကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပိတ်ပင်ခဲ့တာမလို့ အဲ့တာကို အမြဲမကျေနပ်ဖြစ်နေခဲ့သူပါသူ့ရဲ့ဖခင်က အန္တရာယ်များတဲ့အားကစားတစ်ခုဆိုကာ ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူငယ်စဉ်မှာပဲ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ထောင်ကျခဲ့ပြီး
ထိုအချိန်မှာပဲ သူ့မိခင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်
အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့် သူ့ဖခင်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးက အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး
အဲ့ဒီနောက်တော့ ဂေါ့ဟာ ကားတိမ်းမှောက်မှူတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတိတ်ကာလကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူပြန်ရောက်သွားတဲ့ကာလဟာ သူမမွေးခင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကာလမှာ သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ကာ
ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နေသွားရင်း သူ့ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တဖြည်းဖြည်းသိလာရတဲ့အခါ……ပစ္စုပ္ပန်မှာရော ဂေါ့နဲ့သူ့ဖခင်ကြားက အဖုအထစ်တွေကို ပြေပျက်စေနိုင်မလား….
အတိတ်ကာလကို ရောက်သွားချိန်မှာလည်း ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပြသထားပါတယ်
Chantavit Dhanasevi Sammy Cowell Thanawat Wattanapoom
Option 1 teracloud.jp 492 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 492 MB SD (480p)
Option3teracloud.jp 1.2 GB HD (1080p)
Option4onedrive.live.com 1.2 GB HD (1080p)
Office Christmas Party (2016) 2016